Soo dejisan K-Lite Codec Pack 15.6 Basic, Standard... – Vessoft
Bogga rasmiga ah: K-Lite Codec Pack
K-Lite codec Pack – mid ka mid ah ururinta ugu caansan ee codecs inay ku celiska ah qaabab casri ah oo ka mid ah files audio iyo video. software The taageertaa qaabab warbaahinta ugu muhiimsan, sida AVI, MP4, MKV, MP3, FLAC, ACC, DVD, iwm K-Lite codec Pack lafaguraa habka u codecs ku rakiban iyo ka fogaadaan colaadaha iyaga la. software The kuu ogolaanayaa inaad qaado ilaa febwari codec lagama maarmaanka u ah baahida loo qabo in user ee. K-Lite codec Pack bixisaa shaqo xasiloon oo tayo leh oo ay updates joogto ah database ee codecs iyo qaybaha ay.
Taageerada ugu qaabab warbaahinta casriga ah
Dhignaashada dhexeeya qaababka
Customizes qaabeynta codec ah
updates joogtada ah ee codecs iyo qaybaha ay
Soo dejisan K-Lite Codec Pack
Faallo ku saabsan K-Lite Codec Pack
K-Lite Codec Pack Xirfadaha la xiriira
Agabka in ay sii wadaan codsiyada Android iyo ciyaaraha. Sidoo kale waxa ay taageertaa download ee content kala duwan oo ka soo adeegyo lacag la’aan ah.